Filim laga sameynayo dagaalkii budadka iyo feerka ee Shiinaha iyo Hindiya - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaFilim laga sameynayo dagaalkii budadka iyo feerka ee Shiinaha iyo Hindiya
Jilaaga caanka ah ee aflaanta Bollywood-ka Ajay Devgan ayaa lagu wadaa inuu dhawaan soo saara filim cusub oo ka hadlaya dagaalkii dhawaan dhexmaray ciidammada dalalka Hindiya iyo Shiinaha ee ka dhacay dooxada Galwan ee xadka labada dal.
Dagaalkan ka dhashay muranka dhanka xadka ee ugu muddada dheeraa dunida kaas oo socday ku dhawaad nus qarni ayaa horseeday in la dilo 20 ka mid ah ciidammada Hindiya. Ma cadda khsaaraha Shiinaha ka soo gaaray dagaalkaasi.
Labadan dal ee haysta Nukliyerka waxaa ka dhexeeyay taarikh dheer oo ah khilaaf dhanka xadka ah kaas oo in muddo ah soo jiitamayay. Isku dhacyadaasi la iskuma adeegsan wax rasaas ah.
Cinwaanka filimka cusub ee Ajay Devgn iyo jilayaasha ka qeyb qaadan doono wali lama go’aaminin
” Filimka wuxuu ku saleysan yahay sheeko dhab ah oo ku saabsan dagaal hal habeen iyo maalin socday. Waxaan u baahanahay inaan filimka ku tabino geesinada ciidammadeena” ayuu yiri Ajay Devgan.
Isagoo ka hadlayay dagaalkii dhexmaray ciidammada dalkiisa iyo kuwa Shiinaha 15 June, ayaa Ajay Devgn waxa uu bartiisa Twitter-ka ku so qoray “Waxaan salaam sharafeed u dirayaa askeri kasta oo geriyooday isagoo difaacaya xadka dalkiisa Hindiya”
Lama sheegin wali taariikhada la shaacin doono filimkan cusub.